SERASERA, TENY MALAGASY: 08/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 08/02/11
8 Février 2011, 22:53pm
Kly Charles Hitory ny ministry ny Fitsarana
Sambany teo amin’ny tantaram-pirenena no nisy nahasahy nitory ministra am-perinasa. Araka ny loharanom-baovao dia hitory an-dRazanamahasoa Christine ny lietnà-kolonely Charles Andrianasoavina noho ny filazan’ity farany fa tsy salama saina ny tenany.
Nilaza moa ity manamboninahitra tamin’ny alalan’ny mpisolovava azy fa salama saina tsara ary afaka manaporofo izany ny … (Suivre le lien)
Raharaha 7 febroary Odian-tsy hita ny ampamoaka
Tsy misy izay tsy manamarina ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009 ary namariparitra ny tena nitranga tamin’ny 7 febroary.
Singanina manokana amin’izany ny Lt-Kolonely Charles sy ny Jeneraly Rakotonandrasana izay efa nanome ny ambangovangony rehetra momba ny fanomanana sy ny nataon’izy ireo tamin’iny … (Suivre le lien)
Manandafy Rakotonirina “Ny Firenena Mikambana no tokony hiantoka ny fiverenan-dRavalomanana”
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny ministeran’ny raharaham-bahiny Malagasy dia nanao tatitry ny iraka nampanaovina azy teto Madagasikara amin’ireo mpanelanelan’ny SADC ny Dr Simao omaly ary amin’ireo firenena mikambana ao amin’ny troïka ahitana an’i Afrika Atsimo, Mozambika ary Zambia anio. Andrasana eto Antananarivo ny Dr Leonardo Simao amin’ny … (Suivre le lien)
Izy no nahatonga izao, ka…
« Ekenay antsakany sy andavany », hoy ny maro an’isa ao amin’ny fitondrana avo ao. « Ekena ihany fa misy ny tokony hamboarina », hoy indray ny hafa. Fa mazava be mihitsy ny valin-tenin’ny ankolafy telo ambiny : « tsy azo raisina velively io ». Mijaly mihitsy io tondro zotra natolotry ny manam-pahaizana amin’ny fitsaboana iry. Ny dokotera Leonardo Simao io, iraky ny Sadc, ary nisolo tena ny fianakaviambe iraisam-pirenena tonga teto amintsika, « hamaha ny krizy », hono. Na marimarina kokoa … (Suivre le lien)
Governemanta-n’ny Fahefana avo: Sahobakaka ambody riana
Hangoron’entana sa mbola hijanona maharitra ? Na hiala na ho tafajanona dia tokana ihany ny fihetsik’ireo mpikambana ao amin’ny governemantan’ny fitondrana avo : Tsy miasa tsara, tsy miasa mafy fa mitaintain-dava. Tsy misy fandaharan’asa vaovao, na tonta ho tanterahina fa mampihodina tsy sazoka izay asa mandalo ny masony. Tsy sahy mivolana koa fa te-hifikitra eo amin’ny … (Suivre le lien)
VEHIVAVY MFM: « Aoka izay ny hevitra tsoa-tokana »
Fototry ny krizim-pitondrana nifandimby teto ny fanjakazakan’ny antokon’ny mpitondra tamin’ny fanaovana ampihimamba sy fametrahana hevitra tsoa-tokana, araka ny fahitan’ny vehivavy Mfm azy. Hentitra, noho izany, ny fanazavan-dRtoa Rasoaniaina Malalatiana, anisan’ny mpitarika ny vehivavy Mfm fa tsy … (Suivre le lien)
ANDRY RAJOELINA: "Ho hitan’ny vahoaka eo izay mbola sakana "
Ahoana ihany ity toe-draharaham-pirenena eto amintsika ity ? Miroso amin’ny famahana ny krizy hatrany ny Fitondrana tetezamita... "Ho hitan’ny vahoaka eo izay mbola sakana ", hoy ny Filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina.
"Tsy maintsy hajoro ireo rafitra vaovao voalazan’ny Lalàmpanorenana. Izay no anaovana antso avo ireo hery politika rehetra sy ireo … (Suivre le lien)